मानव कि दानव ? महिलालाई काटेर मासु खाएपछि-NepalKanoon.com
मानव कि दानव ? महिलालाई काटेर मासु खाएपछि
मान्छेले आफ्नै व्यवहारले मानव र दानव को पहिचान आवफै दिन्छ । देउता र दानव दुबै यहीँ मानव चोलाभित्रै प्रसस्तै पाइन्छन् । अमेरिकामा यस्तै घटना भएके छ जहाँ एकजना मानिसले यस्तो व्यवहार गरेका छन् की उनलको वाीतविक पहिचान राक्षस हमे भन्नेमा ।
एक ३७ वर्षे पुरुषले एकजना महिलालाई मारेर उनको सरीर टुक्रा टुक्रा पारी कपाकप मासु खाए । समाचार अनुसार टेनिसीका बासिन्दा ग्रेगोरी स्कट हेलले लिसा हेदर नामकी महिलाको हत्यामात्र गरेनन् उनको टाउको, खुट्टा तथा हात लगायतका अंग काटेर परक परक पारे ।
समाचार अनुसार उनले ती महिलाको मासु काटेर खाए पनि । अनि बाँकी रहेको सरीर आफ्नैै घर अगाडि गाडे । उनले आफुले महिलाको सरीरको मासु खाएको अनुसन्धान अधिकारी समक्ष स्विकार गरेको सिएनएनले जनाएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरुका अनुसार मारिने महिला र ती पुरुषबीच पूर्व चिनजान थिएन । ती पुरुषले एक्कासी महिलालाई मारेर त्यस्तो राक्षसी काम गरेका हुन् । हत्याको एक दिन पछि उनी पक्राउ परेका थिए । उनी विरुद्ध निर्मम हत्या र लासलाई समेत दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ ।